Côte d’Ivoire : Horohoro ao Abidjan. · Global Voices teny Malagasy
Côte d’Ivoire : Horohoro ao Abidjan.
Voadika ny 21 Marsa 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français
Ity lahatsoratra ity dia fanadihadina manokana nataon'ny Global Voices tamin'ireo zava-nitranga tao Côte d'Ivoire taona 2011 (amin'ny teny malagasy; misy amin'ny teny frantsay koa ny ankamaroan'ny lahatsoratra)
Niaina ireo herisetra nisesisesy alohan'ny nisian'ny ady anaty akata izay niainany nandritra ny andro vitsivitsy i Abidjan, fanafihana ireo fonenan'olo-tsotra izay fahavalo politikan'i Laurent Gbagbo.
Namoaka lisitra tsy voafetra ireo fonenan'ny mpiasa ambony RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix) ( Fiarahan'ny Houphouetistes ho amin'ny demokrasia sy ny fandriampahelemana) izay voaraoba sy voadoro i Thiery Latt :
Amichia François, ben'ny tanànan'i Treichville sy ny rainy, Adama Toungara, ben'ny tanànan'i Abobo sy ny minisitry ny Angovo sy ny Harena an_kibon'ny tany, Charles Koffi Diby, minisitry ny Toekarena sy ny Vola, Albert Mabri Toikeusse, minisitry ny teti-pivoarana sy ny Fampandrosoana, Adama Bictogo, Amadou Koné, Zemogo Fofana, Sidy Diallo, Sidiki Konaté, Meité Sindou, Rtoa Constance Yaï, ny Jeneraly François Konan Banny, ny tranom-pianakavian'i Jean-Baptiste Ekra,
Nampiany koa ny lahatsoratra hoe :
Nantsoin'ny ONUCI FM tamin'ny antso an-tariby, nanazava ny minisitra Albert Mabri Toikeusse fa ny marainan'ny Alakamisy farany [3 martsa], tanora maherin'ny 200 mitondra antsy kalaza no niditra an-keriny tao amin'ny fonenany. Amin'ny andro mazava, araka ny filazany, norobain'ireo tanora ny tranony alohan'ny nanaparitahan'ny CeCOS (Centre de commandement des opérations de sécurité) azy ireo.
Ao amin'ny tranokala Abidjan.net, nanome fanazavana fanampiny ny lahatsoratra momba ny tranon'ireo minisitra sy ny mpiara-dia amin'i Ouattara izay misy mikendry handroba :
Amadou Coulibaly, mpanolo-tsaina ambonin'i Alassane Ouattara, niampanga ireo polisy ho nanarama tanora handray anjara amin'ny fandrobana izay nanomboka ny Alakamisy. “Miezaka hametraka fampihorohorona izy ireo”, hoy izy nanambara. “Saingy tsy afaka hanao mihoatra izay efa nataony izy, mitifitra ireo vehivavy tsy mitondra fitaovam-piadiana“, …
Nilaza nahita fiarabe mpitatitra ireo mpikambana ao amin'ny tafika niofana manokana CeCOS (Centre de commandement des opérations de sécurité) ny vavolombelona iray, nandao ny tranon'ny minisitry ny vola Alassane Ouattara ny Asabotsy, Charles Koffi Dib. Nampidirana vata fampangatsiahana tao anaty fiarabe, araka ny filazan'ilay vavolombelona, nilaza fa nahita fiara niverina sy nandao indray mandeha ny trano fonenana ary nitondra coffre avy eo.
Tanora am-polony no namaky ny varavarana sy ny varavaran-kely tao an-trano, alohan'ny nialàny, sady nitondra akanjo fitondra mianjaika sy akanjom-bahivavy ary koa nitondra fitaovana maro isan-karazany, hoy ny vavolombelona iray tsy nety niseho noho ny tahotra valifaty.
Fa ohatrinona ny vidin'ny tranon'ireo mpiasa ambony manohana an'i Ouattara izay norobahina sy nopotehina nanontany i C.K.
Raha maty ny vahoaka, raha simba ny fiainana, tokony hiantra ireo fanaka lafo-vidy ve ? Tokony hiresaka momba ireo trano simba sy voaroba ve? Inona no lanjan'ny fandrobana ireo trano fonenana … manolona ireo vehivavy voavono tao Abobo, Treichville, ireo tanora sy zaza naratra, ireo lasibatr'i Daoukro, Duekoué sy ny hafa koa? … Na tamin'ny Septambra 2002 na Novambra 2004, mbola tsy nahazo izao faharavana sy fandravana toy izao ny krizy ivoariana . Fa tsy tokony hitomany ny fanaka simba isika. Fa tokony hitomany an'ireo namoy ny ainy, ireo naratra, ireo mikotringa sy ireo mitondra kilema mandra-pahafaty.
Misy ireo izay ho lasibatra amin'ny fandrobana, hoy i Sindou Cissé nanantotosa ny lahatsoratra izay mitondra ny lohanteny hoe Fidinan'ireo ‘’tanora tia tanindrazana’’ tao amin'i Touré Ahmed Bouah – Zaza namoy ny ainy, roa hafa nalaina an-keriny :
Tonga tao amin'i Touré Ahmed Bouah ny Alatsinainy ireo tanora mpanohana an'i Gbagbo izay nandroba ireo fonenana tao Abidjan tao anatin'ny andro vitsivitsy. Mampahonena ny vokatr'izany… Rehefa avy nanakorontana ny villa sy nangalatra ireo fanaka, dia naka an-keriny zazalahikely roa izy … ary namely ny fahatelo izay niaro-tena mba tsy ho entiny. Araka ny filazan'ny rainy …, iray amin'ireo kambana 12 taona ny lahikely izay namoy ny ainy. Touré Losséni ny anarany, rahalahy kambana aminy i Touré Lacina, ary ny zandriny 8 taona, Touré Seydou, izay nalaina an-keriny. Nahafahan'ireo mpanao gazety nijery ny ambadiky ny fahasimbana nataon'ireo tsy mataho-tody ny fitsidihana ireo toerana, teo amin'ny 5 ora hariva teo, tao anatin'ny fiara 4*4 eo amin'ny roapolo eo ho eo, araka ny filazan'ny vavolombelona.
Nanohy i Anzoumana Cissé fa taorian'ny fandrobana ny fonenan'i Touré Ahmed Bouah : Ny zanany 12 taona novonoin'ireo milisy sy ny Fesci ary koa ny fangalana an-keriny ireo zaza kambana:
…Any amin'ny “cité Rouge” ireo mpaka an-keriny. Ary mangataka tamby 250 millions FCFA…
Nilaza fa nahangona ny fijoroana vavolombelona nataon'ny rainy, Andriamatoa Hamed Bouah i Y.DOUMBIA
« …, mbola tsy mpanentana amina fironana politika aho. Mpandraharaha ara-toekarena aho ary gaga aho raha izaho no ho lasibatra ankehitriny », hoy ny fitarainan'i Touré Hamed Bouah.
Ao Abidjan, miaritra ny fampijalian'ny kodiarana koa ireo “mpikomy” , ny anaran'ny kaody amin'io famonoana olona tsy notsaraina io dia “ARTICLE 125″ izany hoe 100FCFA ho an'ny solitany hamafazana ireo lasibatra ary 25FCFA ho an'ny afokasoka handoroana.
Namoaka ity hafatra ity i @StevenJambot tamin'ny 8 martsa :
Nodorana velona CIV, izany no horonan-tsary tsy hay zakainahttp://on.fb.me/gGruhv Tsy afaka hiteny hoe tsy nahafantatra. #civ2010.
Tamin'ny 14 mars, ny tranokala Koaci.com dia mampiseho ny fitoraham-bato nahazo ny tovolahy iray andeha hijery ny namany ao Yopougon ao amin'ny faritry ny mpanakarem-be(i Blé Goudé) izay aorian'ny “groupement foncier” alohan'ny garazy Dosso, nihevitra ho mpikomy ny CeCOS izay nitifitra azy teo amin'ny ranjony mba tsy ahafahany mandositra, ary nofaranan'ireo mpanohana an'i Gbagbo tamin'ny fitoraham-bato.
Tsy miafina akory ireo mpamono olona http://yfrog.com/h7188dp http://yfrog.com/gyhbpep http://yfrog.com/h82z8vp http://yfrog.com/h75kzsp
Heverina ho mpitoraka ao Youpogon. Sarye via @N2_language
Amin'izany toe-javatra izany, nibaribary ny fakàna an-keriny :
Aiza no misy an'ny Kolonely Major DOSSO Adama, mpanamory taloha an i houphouet boigny, nisy naka an-keriny teo amin'ny akaikin'ny masoivoho Amerikana ao Abidjan ?
nanontany @diabymohamed. Ao amin'ny Facebook, nanipika ireo tranga : fakàna an-keriny ny Kolonely Dosso sy ny tena anton'izany mazava izay nitranga ny 12 martsa ny fanambarana avy amin'ny gazety.